ကာရီ | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: Carissa Rawson
နေအိမ် > Carissa Rawson
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာရထားလမ်းခရီးသွားခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံး Eco-friendly နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်. ကြောင်းအဆုံး, ငါတို့သည်သင်တို့ဥရောပတလွှားအကောင်းဆုံးနဲ့စျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေကိုရောက်စေဖို့နီးပါးနှစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောရထားအော်ပရေတာနှင့်အတူညှိနှိုင်းခဲ့ကြ. ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ သငျသညျအစဉျအမွဲကပြူးကြည့်တူခံစားရသောအရာကိုအံ့ဩကြပါပြီ, ကျယ်ပြန့်မျက်လုံးများနှင့်, အားဖြင့်လောကဓာတ်လေပြင်းအဖြစ်ကြီးမားသောရုပ်ပုံပြတင်းပေါက်ကို? ဘယ်လိုဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုဆင်း trundles အဖြစ်ရထားများ၏တည်ငြိမ်လှုခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှ lulled ခံအကြောင်းကို? ရထားခရီးသွားခြင်းသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပပြင်ပကဒီမှာ? သငျသညျသကဲ့သို့ငါနံနက်အဖြစ်အများသုံးအားဖြင့်တျရှုပျထှေးနေလျှင်သင်၏လက်ကိုမြှင့်. သေချာတာပေါ့, နယူးယောက်မှာမြေအောက်ရထားရှိတယ်, နှင့်တိုရွန်တိုမက်ထရိုပြေး, ဒါပေမယ့်အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့, ကမ္ဘာကြီးသည်ကားများပေါ်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားလာသည်. ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာကိုတွေ့သောအခါ…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အဆိုပါ coronavirus ဖြစ်ပွားကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကြီးမားအကြောင်းမရှိခဲ့, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးခရီးသွားများအတွက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း. ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပြောင်းရန်ခက်ခဲပြီးလက်မှတ်များကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးတော့ပြုပါတယ်. သငျသညျအလုပျမှာသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်အတွက်ထားပြီးပြီ, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရေတွင်းတစ်တွင်း-ထိုက်တန်တဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်ဟန်ဂေရီကူးခေါင်းနှစ်လုံး. ထိုရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်စဉ် – နောက်ဆုံးတော့, ဘူဒါပက်လှပသောမြို့ဖြစ်၏ – ကိုယ့်ကိုကိုယ်မရောင်းကြဘူး…
စာဖတ်ချိန်: 12 မိနစ်များ ကလေးများနှင့်အတူစီးနင်းခြင်းဆိုင်ရာရထားပေါ်တွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့ပြီးသင့်ကလေးငယ်များကို enter ည့်ခံကျွေးမွေးရန်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးခဲ့သည်. Reading စာအုပ်များ, Uno ကစားခြင်း, အော်ဒီယိုစာအုပ်တွေကိုနားထောင်တာဟာလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်, ဒါပေမယ့်မတိုင်မီ download လုပ်ဖို့ apps များတန်ချိန်ရှိပါတယ်…